🛏️ Ụlọ | Gaa na Hultsfred
Dị ka akwa maka ahụmahụ magburu onwe ya!
hem » 🛏️ Ụlọ
Lọ nkwari akụ, ụlọ mbikọ, ụlọ, B&B ma ọ bụ ịma ụlọikwuu - n'agbanyeghị ebe na otu ị chọrọ isi zuo ike n'abalị, enwere ebe obibi kwa afọ nke nwere ike ịtọ ụtọ na mmasị gị. Were onwe gị na izu ụka dị oke ọnụ jiri ọkọlọtọ kachasị elu ma ọ bụ maa ụlọikwuu n'otu n'ime ebe obibi anyị mara mma ma ọ bụ n'okike - anyị ga-ehi ụra nke ọma ihe ọbụla ị họọrọ!
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere nhọrọ dị iche iche nke ọnụ ụlọ - ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-eche na isi ụlọ ma ọ bụ ụlọ na ụlọ dị iche iche, ị na-ahọrọ. Vena Värdshus dị nso na Astrid Lindgren's
Villa Karllösa dị nso na etiti Målilla. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị n'etiti okike na mpaghara ọhịa mara mma. Ọ na-enye ọnụ ụlọ dị mma na nke ọgbara ọhụrụ, emezigharịrị ọhụrụ
Fiskebodarna - Stora Hammarsjöområdet dị ihe dịka 10 km ọdịda anyanwụ nke Hultsfred, ihe dị ka nkeji 25 na Vimmerby. Mpaghara a bụ mpaghara nchekwa ihe ọkụkụ na ịkụ azụ nke gụnyere ihe dịka iri atọ
Stenkulla bụ ụlọ ezinụlọ nke nwere ọdọ mmiri na mpaghara mara mma. Ihe dịka 10 km ọdịda anyanwụ nke Hultsfred bụ mpaghara na nchekwa nchekwa azụ Stora Hammarsjöområdet. Mpaghara nwere agwa ohia
Lọ ezinụlọ na-ekiri ọdọ mmiri na mpaghara mara mma. Ihe dịka 10 km ọdịda anyanwụ nke Hultsfred bụ mpaghara na nchekwa nchekwa Stora Hammarsjöområdet. Mpaghara nwere agwa ocha nke choro
Ezinaụlọ nke nwere ọdụ ọdọ mmiri na-asọ asọ gụnyere jetty na ụgbọ mmiri. Ihe dịka 10 kilomita ọdịda anyanwụ nke Hultsfred bụ mpaghara na-echekwa ụdị azụ na azụ azụ - Stora Hammarsjöområdet. Mpaghara nwere agwa ọzara
Yinye nwa ehi Oghere ebe a na-adọba ụgbọala
Oghere ebe a na-adọba ụgbọala na ogige Kalvkätte nwere ohere ịnweta mmiri, WC na akwa mkpofu. Na nso nwa ehi olulu saịtị e nwere nwa ehi ubi nke nwere dị iche iche ubi na okooko osisi na ndị ọzọ
Ime ụlọ Hagadal n'abali
Ụlọ ndị abalị nwere ohere maka mmadụ anọ. Obere ụlọ dị mfe nke 10 square mita nke zuru oke maka ịnọ abalị. Ụlọ ndị ahụ dị n'ime ogige a gbara ogige n'azụ ụlọ ọrụ ahụ.
Hotell Dacke bụ ụlọ oriri na ọ familyụ familyụ ezinụlọ dị na Virserum. N'akụkụ ụlọ nkwari akụ ahụ bụ nnukwu ọdụ ụgbọ ala. Oge dị nso na oke ọhịa na ọdọ. Hotellọ oriri na nkwari akụ nke ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ
Ọ bụ egwu na-etinye Hultfred na eserese na enweghị ebe ọzọ na Hultsfred bụ egwu dị omimi na mgbidi dịka Hotell Hulingen. Anyị
Målilla Hembygdsparks na-adọba ụgbọala
Målilla Hembygdsparks na-adọba ụgbọala ọtụtụ. Na nnukwu ọdụ ụgbọ ala na Målilla hembygdspark enwere ebe ndị na-adọba ụgbọala maka ndị na-adọkpụ na moto.
N'ebe etiti dị nso ọdọ mmiri na ebe a na-eme njem, ọdụ ụgbọ mmiri ahụ nwere ebe a na-adọba ụgbọala anọ. Free iguzo otu abalị. Ọ bụrụ na ịchọrọ ọrụ pitch, a na-ezo aka na Camping Hultsfred ma ọ bụ
Ultslọ ndozi Hultsfred
Ụlọ mbikọ dị na Central Hultsfed. Ihe ndina 25 n'ime ọnụ ụlọ abụọ, ebe obibi na ụlọ ezinaụlọ. kichin ọgbara ọhụrụ maka nri onwe ya na ọnụ ụlọ iri nri. Ụlọ ịsa ahụ nkekọrịtara, WC, ụlọ mposi nwere nkwarụ
Målilla Hotell bụ obere ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ. A na-eri nri ehihie taa, la carte, pizza na salads ebe a. Ụlọ oriri na ọṅụṅụ nwere ikike zuru oke. Enwere oche iri anọ
Rụrụ ụlọ n'agwaetiti nke gị zuru oke maka gị onye na-achọ udo na jụụ. Nọrọ n'àgwàetiti nke ya na obere ụlọ maka 4
Ulo ezinaụlọ nwere ọdụ ọdọ mmiri sloping tinyere jetty na ụgbọ mmiri. Ihe dịka 10 km ọdịda anyanwụ nke Hultsfred bụ mpaghara na nchekwa nchekwa azụ Stora Hammarsjöområdet. Mpaghara nwere agwa ọzara nke na-akpọ oku
Irslọ mbikọ Virserum
Ebe ị na-ebi ma ọnụ ala na ntụsara ahụ, nso ma Smalspåret, Astrid Lindgren's World, Virserums Konsthall na ọtụtụ ihe omume ndị ọzọ. Ebe obibi nwere nso
Ebe ị na-ebi na ọmarịcha anya nke Lake Hulingen! Ị nọ nso n'akụkụ osimiri, akụrụngwa na cafe. Ịga ije dị kilomita abụọ n'akụkụ okporo ụzọ ahụ ga-akpọrọ gị
Ebe obibi nke Hesjön
North nke Målilla bụ ogige okike Hesjön. Enwere ebe a na-adọba ụgbọala maka ndị njem na ebe obibi mkpanaka, yana ebe ụlọikwuu dị iche. Ebe a na-adọba ụgbọala onye ọlụsị. Site na ebe a na-adọba ụgbọala, e nwere okporo ụzọ a na-ahazi nke ọma gbadaruo
Lönneberga agwa ụlọikwuu
Oghere ebe a na-adọba ụgbọala maka ndị njem, ebe a na-adọba ụgbọala na ohere nke ịma ụlọikwuu Ebe a bụ ịnweta mposi nwere nkwarụ nwere mmiri ọkụ na ime ụlọ na-agbanwe. Mpaghara Barbecue na ihe dị ka mita 900 ruo ebe ịsa ahụ.
Hotellọ nkwari akụ & talọ oriri na ọ Resụ Resụ
Hotellọ nkwari akụ a, nke ezinụlọ na-elekọta dị naanị mita 50 site na Hultsfred Train Station na Småland. Site na họtelu ị nwere nlele nke Lake Hulingen dị nso. Ha niile n'otu n'otu
Naturedị agwa ụlọ Stora Hammarsjön
Ebe mara mma dị na mpaghara ebe nchekwa na ịkụ azụ Stora Hammarsjön Naanị na mpụga Hultsfred bụ mpaghara Stora Hammarsjön na mpaghara nchekwa azụ. Na Stora Hammarsjön, ihe dịka kilomita iri, e nwere otu
Ölọ mbikọ Lönneberga
Ölọ mbikọ Lönneberga dị na mpụga Emil Lönneberga. Ölọ mbikọ Lönneberga nwere ezigbo ọrụ, nnukwu ahụmịhe ọdịdị na mmemme maka afọ niile. Thelọ mbikọ ahụ nwere akwa 55. Ime ụlọ
N'ebe ugwu nke Hultsfred bụ ubi Kloster. N'ime ime obodo mana n 'ije ije rue ulo ahia, ebe igwu mmiri, uzo di warara na ebe ije di nma. Ebe i nwere ike ịgbazite ọnụ ụlọ, ụlọ